Ejipta: Fihemorana tsy misy fetra ny aterineto asiana fetra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Aogositra 2009 4:09 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, 繁體中文, 简体中文, عربي, English
Nangonin'i Tarek Amr tamin'ny lahatsoratra teo aloha ny fihetsika voalohany nataon'ny tontolom-bolongana Ejipsiana teo am-pandrenesana politikan'ny fahaiza-mampiasa soratra fototra [TE-Data] (FUP) , narahina hetsi-panoherana. Niova hevitra ihany avy eo ny Minisiteran'ny Fifandraisana sy ny Teknolojian'ny Serasera Ejipsiana.
Maro ny lahatsary noforonina sy navoaka hanesoesoana ny FUP; Nanoratra ny manimba ny fiainanao… ET Data i Ashraf Hamdy ary i Adham namoaka ny Lahatsarin'ny fakana tahaka an'i Hitler hanoherana ity fanapaha-kevitra tsy rariny ity.
Namoaka lahatsoratra manandratra ny fandresen'ny mpampiasa aterineto i ElLeithy :
Nanambara ny Minisitry ny Fifandraisana sy ny Teknolojian-tserasera, Dr. Tarek Kamel, izay nilefitra teo anoloan'ny fangatahan'ny be sy ny maro , fa tsy hampiharina amin'izay efa mpampiasa azy amin'izao fotoana ny FUP. hanandrana ilay politika mandritra ny ora volana kosa ireo vao misoratra anarana ahafahan'ny governemanta manombatombana ny fomba fampiasan'ny mpiserasera ny aterineto.
Nitatitra ny fihetsiketsehana notontosaina tamin'ny 13 Aogositra kosa i Tarek Ez Alden:
Nikarakara fihetsiketsehana hanoherana ny politika vaovao mametra ny troka an-tserasera (téléchargement) ny mpiserasera teto Ejipta. Nitondra sora-baventy isan-karazany izy ireo nandritra ny fitokonana: “Ratsy ho an'ny fahasalamanao ny troka .. mety hamono anao ny troka!”, “Nahoana ianao no hametra anao … ho hitanay ny hamerana anao”, ary “Fihemorana tsy misy fetra ny aterineto asiana fetra.”